केटाहरूलाई असल ‘मान्छे’ बन्न कसरी सिकाउने ?
फागुन १, २०७५ | जस्टिन मिंकल
यदि हामीले केटाहरूलाई सानैदेखि महिलाहरूप्रतिको सम्मानका कुराहरू सिकायौं भने त्यो ज्ञान उनीहरूले जीवनभर प्रयोग गर्छन्।
एक दिन मेरी साथी स्कूलबाट घर फर्कंदै गर्दा बाटोमा एउटा ट्र«क अचानक अगाडि आएर रोकिएछ । त्यसको ड्राइभरले बाहिर निस्केर मेरी साथीलाई ट्रकभित्र लान घिसार्न थालेछ । उनले न्वारानदेखिको बल लगाएर प्रतिवाद गरिछन् । सौभाग्यवश त्यसैबेला अर्को गाडी आएछ र त्यो बदमास ड्राइभर भागेछ ।
त्यो साँझ् मैले ती साथीलाई भेट्दा उनको ओठमा चोट थियो र कपाल लुछिएको थियो । त्यो ड्राइभरबाट जोगिन खोज्दा उनीमाथि निकै हातपात भएको रहेछ ।
त्यसदिन उनी सम्भाव्य बलात्कारबाट त जोगिइन्, तर भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक हिसाबले भने उनमा त्यस घटनाको असर महीनौंसम्म रहिरह्यो । विद्यालयमा हिंड्दा होस् या बजारमा— उनको नजर झ्ुकेको हुन्थ्यो । आफूमाथि केटाहरूका आँखा नपरुन् भनेर उनी झ्ुत्रा लुगा लगाउँथिन् र नराम्री देखिन खोज्थिन् । उनी प्रायः असुरक्षित महसूस गर्थिन् ।
त्यो घटनापछि म समाजमा महिलाप्रति गरिने विभिन्न प्रकारका हिंसाप्रति बढी संवेदनशील भएँ । त्यस्ता हिंसाका कति घटना नजिकबाट अनुभव पनि गरें । असह्य भएपछि साथीले भोगेको हिंसाका बारेमा एक जना शिक्षकलाई सुनाएँ । तर उनले त ‘हैन होला, बनावटी कुरा पनि हुन सक्छ’ पो भनिदिए ! त्यो जवाफ मलाई नमीठो लाग्यो । रिस उठ्यो । त्यो रिस शान्त पार्न म हिंसा भोगेका महिलाहरूको आश्रममा स्वयंसेवी भएर काम गर्न थालें । त्यो आश्रममा रहेको एउटा पाँच वर्षे बालकले एक दिन एउटा बार्बी डलको टाउकोमा मुड्की बजार्दै र त्यसको कपाल लुछ्दै गरेको देखें । तर, तिनै केटाहरू आश्रमको सुरक्षित र मायालु वातावरणमा भिज्दै गएपछि त्यस्ता खेलौनालाई माया गर्दै कपाल कोरिदिन थाल्थे । केटाहरूको व्यवहारमा आएको त्यस्तो परिवर्तन मेरो निम्ति ठूलो पाठ भयो । मलाई विश्वास भयो, हामीले सानै उमेरमा बालबालिकालाई सही बाटो र व्यवहारमा लगाइदिन सक्यौं भने तिनीहरू जीवनभर नै त्यही बाटोमा हिंड्न सक्ने रहेछन् ।
एक दिन मैले केटाहरूलाई सहानुभूतिशील हुन कसरी सिकाउने भन्ने बारेमा बालमनोविज्ञ माइकल थम्सनका कुरा रेडियोमा सुनें । उनले भने, “मैले गरेर हुने भए केटाहरूलाई केही समयसम्म उनीहरूभन्दा साना बच्चा हेर्न लगाउने थिएँ । म उनीहरूलाई रुँदै गरेका, चित्त दुखाएका र सान्त्वना खोजिरहेका ससाना बालबच्चालाई फुल्याउने जिम्मा दिने थिएँ । साना कक्षाका भाइबहिनीहरूलाई चित्त दुखेका बेला, उनीहरूले एक्लोपन महसूस गरेर खिन्न भएका बेला अनि अभिभावक सम्झ्ेका बेला ठूला कक्षाका विद्यार्थीलाई जिम्मा लगाएर सान्त्वना दिन लगाउँथे । यसले ठूला केटाहरूमा पनि परिवर्तन ल्याएर असल मान्छे बनाउन मद्दत गर्छ ।”
केटाहरूमा समानुभूति विकास गर्न चाहने शिक्षकहरूका लागि यी तरिका उपयोगी हुन सक्छन् ।
केटाहरूलाई साना बालबालिकाको हेरचाह गर्न दिऊँ
मैले स्कूलमा कक्षा–१ र २ का केटाहरूलाई पूर्व–प्राथमिक तहका बालबच्चाको कापी÷किताब मिलाइदिने जिम्मा दिएँ । मेरै कक्षाकी एउटी नानीका १२ वर्षे दाजुले घरमा उनलाई ज्यादै नै हेप्दा रहेछन् । मैले तिनलाई हप्ताको एकपटक मेरो कक्षामा आएर केटाकेटीसँग काम गर्न प्रस्ताव गरें । त्यसपछिका केही दिनमै आफ्नी बहिनीलाई स्कूल र घर दुवै ठाउँमा माया गर्न थाले ।
धेरैजसो केटीहरूले सानै उमेरदेखि घरमा आफ्ना भाइबहिनीलाई हेरचाह गर्ने, खाना ख्वाउने र दिसा–पिसाब गराइदिने गर्छन् । आमा या दिदीबहिनीले घरको काम गर्र्दै गरेका बेला कतिपय केटाहरू खेलेर या टिभी हेरेर बसिरहेका हुन्छन् । हामी शिक्षकले घरको यो अवस्था प्रत्यक्षतः परिवर्तन गर्न सक्दैनौं । तर केटाहरूलाई स्कूलका साना–साना भाइबहिनीहरूको स्याहार र पढाइमा मद्दत गर्न लगाउन अवश्य सक्छौं ।
आदर, सबैलाई आदर
आफ्ना विद्यार्थीलाई के कुरा सिकाउने भन्ने बारेमा हामी शिक्षकहरूको महŒवपूर्ण भूमिका हुन्छ । पढाउने क्रममा हामी उनीहरूलाई कसरी राम्रा पाठक, लेखक, वैज्ञानिक, कलाकार, विचारक, गणितज्ञ बन्ने भन्ने कुरा मात्रै सिकाउँदैनौं, हामी उनीहरूलाई बलियो र दयालु व्यक्ति कसरी बन्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउँछौं । त्यसरी नै महिला हुन् वा पुरुष, सबैलाई आफ्नो अधिकार, भावना र शरीर महŒवपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले अनेक किसिमले र सानै उमेरदेखि सिकाउनु जरूरी छ ।
यदि हामीले केटाहरूलाई सानैदेखि महिलाहरूप्रतिको सम्मानका कुराहरू सिकायौं भने त्यो ज्ञान उनीहरूले जीवनभर प्रयोग गर्छन् । हाम्रा व्यवहार र क्रियाकलापहरू हामीले जन्मजात लिएर आएका कुरा होइनन्, यी सबै हाम्रो सिकाइमा आधारित हुन् । विद्यार्थीलाई कुनै पनि किसिमको ‘हिंसा नगर्न’ र ‘अरूको अनादर नगर्न’ सिकायौं भने उनीहरूलाई हामीले स्वतः एक असल पुरुष (मान्छे) बन्नका लागि आवश्यक शिक्षा दिएका हुन्छौं ।
१ अक्टोवर २०१८ को www.edweek.org बाट